mai 2017 – filazantsaramada
MANGATAKA HO ANAO JESOSY.
« Tsy mangataka ho an’izao tontolo izao Aho, fa ho an’izay nomenao Ahy, satria Anao izy. » Jaona 17:9 Manavaka Jesosy eto. Avahany izay nomen’i Jehovah Andriamanitra Azy. « Fa ny teny izay nomenao Ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny ». Efa noraisintsika ve ny Teniny? Raha noraisintsika ny Tenin’i Jesosy dia mangataka ho antsika Jesosy. « Anao ireny […]
Publié parfilazantsaramada mai 26, 2017 mai 24, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MANGATAKA HO ANAO JESOSY.
MPISORONA HO ANTSIKA JESOSY.
« Ary ho an’ireto no anamasinako ny tenako, mba hanamasinan’ny fahamarinanao azy. » Jaona 17:19 Sarobidy ny fananantsika an’i Jesosy, ary raha amin’ny anarany no angatahintsika dia omen’ny Ray antsika izany araka ny teniny. Raha mbola ny fahotantsika no navela nilomantsika dia tsy ho nahita rariny teo amin’i Jehovah Andriamanitra isika. Mahay mitondra ny fahalementsika Jesosy. Ny […]
Publié parfilazantsaramada mai 24, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MPISORONA HO ANTSIKA JESOSY.
MANAN-KANINA VA IANAO?
« Anaka, manan-kanina va hianareo? Dia namaly Azy hoe izy: Tsia. » Jaona 21:5 Raha izao fanontaniana napetrak’i Jesosy tamin’ny mpianatra eto izao dia misy antony amin’ny Tompo ny tsy fananan’ny mpianatra izay hohanina. Tsy ataon’ny ny Tompo tsinontsina izay hohanin’ny mpianatra. Ry Petera moa teto dia efa nanarato nandritra ny alina, nefa tsy nahazo. Rehefa nanaraka […]
Publié parfilazantsaramada mai 16, 2017 septembre 13, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MANAN-KANINA VA IANAO?
Mpianatra nahavita ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” (FSMI) Misaotra an’Andriamanitra fa dia miisa telo indray ireo mpianatra nahavita ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny FSMI izay atolotry ny Feon’ny Filazantsara (FF) teny amin’ny Lycée Nanisana. Ny Alatsinainy 24 May 2017 moa no fotoana nanolorana azy ireo ny sertifika, nandritra ny fananganan-tsaina. Iray tamin’ireo mpianatra nahavita […]
Publié parfilazantsaramada mai 10, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Lycée Nanisana
AZA MANARAKA NY FANAON’IZAO TONTOLO IZAO.
« Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. » Romana 12:2 Hatraiza ny ezaka tokony ataon’ny kristiana amin’ny fanamasinana azy? Sarotra tokoa ny famaliana an’io fanontaniana io. Ny marina ara-tSoratra Masina no azontsika ianteherana, nefa dia mbola mila ny Fanahy Masina […]
Publié parfilazantsaramada mai 5, 2017 mai 5, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur AZA MANARAKA NY FANAON’IZAO TONTOLO IZAO.
FJKM Antsahavola Fitiavana (SPAA 12)
Fanolorana sertifika ho an’ireo mpianatra nahavita ny “Fianarana Soratra Masina Ifandraisana” (FSMI) Na dia vao herin-taona mahery monja aza no niatombohan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny FJKM Antsahavola Fitiavana izay iandraiketan’ny Atoa Andriamalala Réné, Mpitandrina dia efa maro ireo Kristiana resy lahatra nandalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny FSMI. Koa ny Alahady 30 […]
Publié parfilazantsaramada mai 5, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FJKM Antsahavola Fitiavana (SPAA 12)